पेटकाे बच्चा श्रीमानले मेराे हाेइन भनेपछि श्रीमतीले गरिन् देहत्याग ! – Nep Stok
पेटकाे बच्चा श्रीमानले मेराे हाेइन भनेपछि श्रीमतीले गरिन् देहत्याग !
पुष २६, २०७८ सोमबार 331
श्रीमानले गर्भको बच्चा आफ्नो नभएकाे भन्दै या’तना दिएपछि श्रीमतीले प्रा’ण त्या’ग गरेकी छिन्। झापाको मेचीनगर– १३ की २४ वर्षीया विद्या उप्रेती भट्टराईले श्रीमानको या’तनाले देहत्याग गरेकाे स्थानीयले बताएका छन्।
विद्याले गत वैशाखमा मेचीनगर– २ का विवेक भट्टराईसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका विद्या र विवेकले भागी विवाह गरेका थिए। उनीहरूले परिवारले एक महिनाअघि मात्रै घर भित्र्याएका हाे।
मृतक विद्याको पेटमा नाै महिनाको बच्चा रहेकाे पीडित परिवरकाे दाबी छ। माघ १५ गते विद्या आमा र विवेक बुवा बन्दै थिए। तर, विद्याले नाै महिनाको पेटको बच्चासहित देहत्याग गरिन्।
विवेकले यो मेरो बच्चा मेराे होइन भन्दै पटक–पटक विद्यालाई या’त’ना दिएको र दाइजो कम दिएको आरोप माइती पक्षको छ।
मृतक विद्याको शरीरमा नि’ल’डा’मस’मेत देखिएको र घटना रहस्यमय भएको भन्दै माइती पक्षले श्रीमान विवेकसहितलाई कारबाहीकाे माग गरेका छन्। माइती पक्षले उजुरी दिएपछि श्रीमान विवेकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
विद्याका माइती पक्षले ह’ ‘त्या ग’रे’र झु’ ‘ण्डा’एको बताउँदै आएका छन्। किन त विद्याले आफूसँगै पेटमा हुर्किदै गरेको नाै महिनाको बच्चासहित देहत्याग गरिन्, भन्ने बारे अनुन्धान भइरहेका प्रहरीले जनाएकाे छ।
Prevउपत्यकाका सीडीओ भन्छन्- ‘लकडाउन हुँदैन, हल्लाको पछि नलागौं’
Nextऋणको बोझले हैरान हुनुहुन्छ ? यी ७ सजिलो उपायले राहत दिन्छ
‘रिस गर्दै गर्नुस्, म अगाडी बढ्दै जानेछु’ : पूजा शर्मा